ဝီကီမျိုးစိတ်:အကြောင်း - Wikispecies
This page isatranslated version of the page Wikispecies:About and the translation is 64% complete.
ဝီကီပီးဒီးယားတွင်ရှိသော ဝီကီမျိုးစိတ်အကြောင်း ဆောင်းပါးကိုလည်း ဖတ်ရှု့ကြည့်ပါရန်။
ဝီကီမျိုးစိတ် – ဘာကြီးလဲ? ဘယ်အတွက်လဲ?
မျိုးစိတ်သစ်များကို မျိုးရိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြသည့် ဇီဝဗေဒပညာရှင်များသည် အချက်အလက်များအား အများအားဖြင့် အထူးထုတ်ဂျာနယ်များတွင်သာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြပြီး ထိုအရာများမှာ မည်သူမျှခြုံငုံသုံးသပ်ထားခြင်းမရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များစွာအဖြစ်သို့ ဦးတည်လာခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အထူးပြုထားသော ကျွမ်းကျင်သူများသည်ပင် မျိုးစိတ်တစ်ခုကို တရားဝင်အနေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအား နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် (သို့) ထိုထက်ပို၍ပင် အခါခါ မှတ်တမ်းတင်မိခဲ့ကြသည်ကို သတိမပြုမိခဲ့ကြချေ။
ထို့ကြောင့် မျိုးစိတ်မည်မျှ သိရှိပြီးဖြစ်သည်ကို မသိခဲ့ပေ- ထိုသို့ပြောရသည်မှာ ရယ်စရာ အလွန်ကောင်းလေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်၌ ရှင်သန်တည်ရှိဆဲ မျိုးစိတ်အားလုံး၏ အရေအတွက်ကို ဆိုလိုနေခြင်း မဟုတ်ပါ၊ သိပ္ပံနည်းကျ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့မှုများတွင် ပါရှိသော မှတ်တမ်းတင်ပြီး မျိုးစိတ်အရေအတွက် စုစုပေါင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအရေအတွက် မည်မျှရှိခြင်းအား မည်သူမျှမသိကြပေ။ ကျွမ်းကျင်သူ ပထမတစ်ဦးက မျိုးကွဲ ၁၇,၀၀၀ လောက်ရှိသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်နေသော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူ နောက်တစ်ဦးကမူ ၂၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးဟု ယုံကြည်နေလေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ဇီဝမျိုးရိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မရှိခြင်းနှင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုစီ၏ လက်ရှိအချိန်ထိ သိရှိထားသည့် အခြေအနေနှင့် ၎င်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေရန် ဒေတာဘေ့စ် (သို့) ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် လမ်းညွှန်စာအုပ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေကို ခြုံငုံ၍ ဖော်ပြရမည်ဆိုပါက - ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းပညာရပ်အတွက် အချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မှတ်တမ်းတင်ပြုစုနိုင်သည့် ဗဟိုဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု အရေးတကြီးလိုအပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဝီကီမျိုးစိတ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဘယ်လိုပါဝင်ကူညီနိုင်မလဲ?
Retrieved from "https://species.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikispecies:About/my&oldid=8799148"
Last edited on 22 May 2022, at 11:52